एनआईसी एशियामा खाता खोल्दा २१ लाखको बीमा सुविधा - Parichay Network
एनआईसी एशियामा खाता खोल्दा २१ लाखको बीमा सुविधा
परिचय नेटवर्क द्वारा	 ११ फाल्गुन २०७६, आईतवार २०:३० मा प्रकाशित
काठमाडौँ । एनआईसी एशिया बैंकले न्यू सुपर चमत्कारिक मुद्दती निक्षेप योजनामा उच्च ब्याजको साथै २१ लाख रुपैयाँसम्मको बीमा सुविधा प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।
द्दती निक्षेप खाता खोलेकै आधारमा यो सर्वाधिक तथा अद्धितीय सुविधा चमत्कारिक भएको बैंकले जनाएको छ ।
सामान्यतया मुद्दती खाता भन्नाले ग्राहकले निक्षेप गरेको रकममा आकर्षक ब्याजदर पाइन्छ भन्ने बुझाई छ । तर यस बैंकको न्यू सुपर चमत्कारिक मुद्धती निक्षेप खातामा सर्वाधिक उच्च ब्याजमात्रै उपलब्ध नभई बीमा सुविधा समेत दिएर मुद्धती खाताको दायरा नै फराकिलो बनाइदिएको छ ।
यो मुद्दती खातामा ग्राहकहरुले उच्च ब्याजदर सँगै तीन विभिन्न बीमा सुविधा पनि पाउन सक्नेछन् । यस योजनाअन्तर्गत खाता खोलेका ग्राहकहरुले जीवनमा आइपर्ने अकल्पनीय घटनाको लागि २१ लाख रुपैयाँसम्मको तीन चमत्कारिक बीमा सुविधा पाउने छन् । यो बीमा सुविधाअन्तर्गत खातावालाको दुर्घटनाबाट मृत्यु भएमा वा पूर्ण रुपमा अशक्त भएमा रु १० लाखसम्मको बीमा सुविधा उपलब्ध छ ।
यस्तै, १८ घातक रोगहरुको लागि रु १० लाखसम्म र १ लाखसम्मको औषधी उपचार बीमा सुविधा समेत उपलब्ध छ । यसैगरी औषधी उपचार बीमा अन्तर्गत बैंकले आफ्ना ग्राहकहरुलाई अझ विशेष सुविधा दिने उद्देश्यले बहिरंग (ओपिडी) उपचारमा रु. २० हजारसम्म र अस्पताल भर्ना वापत रु. ८० हजार सम्मको बीमा सुविधा प्रदान गर्नेछ । उक्त ओपिडी बीमा सेवाले ग्राहकवर्गलाई अस्पतालमा भएका सामान्य खर्च जस्तै डाक्टरको शुल्क, ल्याब टेष्ट, औषधि खर्च लगायतका खर्चहरु वापत रु. २० हजार सम्मको भरपाई बैंकले जनाएको छ ।
बैंकले ल्याएको विभिन्न निक्षेप योजनामा हालसम्म १ सय २ जना ग्राहकले यो सुविधाबाट रु ६० लाख भन्दा बढीको बीमा रकम प्राप्त गरिसकेका छन् । सामान्यतयाः यदि ग्राहकवर्गले रु. २१ लाखसम्मको बीमा आफैँले गर्न परेमा करिब १४,००० रुपैयाँ बराबरको बीमा शुल्क बुझाउन पर्ने हुन्छ ।
तर, यस न्यू सुपर चमत्कारिक योजना अन्तर्गत बैंक स्वयम्ले उक्त बीमा सुविधा बापत लाग्ने बीमा शुल्क सम्झौता गरको एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडलाई बैंकले सम्झौता गरे अनुरुप बीमा शुल्क भुक्तानी गर्ने हुँदा ग्राहकहरुले करिब रु. १४,००० को फाइदा हुने बैंकले जनाएको छ ।
टाउको विनाको महिलाको शव खोलामा भेटियो
कोरोनाको उपचार गर्न बागमती प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा रकम पठाउने
मुटुको चालमा समस्या देखिएपछि प्रधानमन्त्री ओली अस्पतालमा
राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनयन पार्टीले निर्णय गर्ने विषय होईन : सल्लाहकार डा.…
कास्कीको सल्यानमा फुटबल मैदाननिर्माण कार्य सुरु
बैतडीमा बस दुर्घटनामा पाँच घाइते
नेपाल प्रहरीका पूर्व डीआईजी महेशविक्रम शाह सहितका ४ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार…
बिरामी भएर अस्पतालनै जानुपरे मलाई फोन गर्नुहोस् : वडाध्यक्ष गुरुङ